I-Sweatshirts → Impahla yokukhuthaza • I-P & M yobuchwephesha yobuchwephesha
Iingubo, ngasemnyango olandelayo ibhulukhwe i IikipaIseti esisiseko yokugqoka kwabasebenzi kumashishini amaninzi. Zikwangumbonisi omkhulu wentengiso yenkampani, iklabhu okanye umsitho, kuba kungekuphela ngokubeka uphawu, kodwa nangombala weengubo, banokuchongwa kunye nophawu. Iingubo ezinikezela ubushushu, vumela inkululeko yokuhamba ngcono kunejakethi, kwaye ikhusele neempahla zangasese.
I-Sweatshirts-imfashini ihamba kunye nentuthuzelo
Kwethu Ivenkile uya kufumana ukhetho olubanzi lwee-sweatshi zentengiso ukulungiselela iinjongo ezahlukeneyo. Iimodeli esizinikezayo zenziwe ngezinto ezikumgangatho ophezulu eziqinisekisa ubomi bemveliso ende.
Enkosi kwiipropathi zabo, iihempe ezikhusela umzimba zikhusela umzimba kakuhle kwiimeko ezahlukeneyo zemozulu. Iindidi zeemodeli zivumela ukuba zisetyenziswe kuwo onke amaxesha onyaka unyaka wonke. Kuxhomekeka kwisimo sezulu okanye iimeko zokusebenza, ungakhetha kwiinguqulelo zasehlotyeni ezishushu, ezinobusika kunye nezicekethekileyo, kunye nokutsiba okuncinanana entwasahlobo nasekwindla.
Ukuthuthuzela kunye nokusebenza
Sazi kakuhle ukuba abathengi bethu baneemfuno ezahlukeneyo zokuthenga ezingabangelwa yimeko yokusebenza kuphela, kodwa bakhetha nokukhetha umntu ngamnye. Ukwazi oku, siye saqinisekisa ukuba i-sweatshti ebonelelweyo kumiselo lwethu lwentengiso yayineempawu ezikhusela ebumdaka, isilumkiso kunye nokukhusela ngokuchasene nezinto eziyimichiza ezinobungozi.
Ukuthuthuzela, kunye nokusebenza, kubaluleke kakhulu. Yiyo loo nto uninzi lweemodeli zinee-welts ezikhululekileyo esinqeni nasezandleni, ukuze kuqinisekiswe ukufakwa okuphezulu kweshushu kunye nokukhusela iimpahla zabucala zabasebenzi kwimonakaliso okanye kumdaka. Ezinye zee sweatshi ziye zathungela-kwizinto ezizodwa ezonyusa ukumelana koomatshini bezinto kwiindawo ezichaphazeleka kakhulu kumonakalo ngenxa yokonyuka kokusetyenziswa (umz. Ii-elbows).
Iinkampani ezininzi ziyayibulela ubuntu obuthile kunye nobuqu, ngakumbi ukuba abaqeshwa badlala indima yokuqhakamshelana nabantu abanokubakho kwikontraktha kunye nabaxumi. Ukulandela le khokelo, kufanelekile ukukhetha indlela yokumakisha ekumgangatho ophezulu oya kumelana nomonakalo, i-abrasion kunye nokuhlamba kumaqondo obushushu aphezulu. Kungenxa yoko le nto siyincomela ubumbano obuzinzileyo kunye nobukekayo isambatho sekhompyuter.
Ukuhonjiswa kwekhompyuter kwimpahla
Kungenxa yesi sizathu ukuba impahla eprintiweyo iyinto ethandwayo yokunxiba kwiindidi ngeendidi zemisitho yangaphandle, indawo yokuma, iinkomfa noqeqesho. Ukunxiba ngemibala yenkampani okanye yeklabhu enobuntu kunempembelelo entle kumfanekiso weshishini kwaye kwandisa ukuqaqamba kwawo.
Sinikezela ngezikhuku ezimhlophe ezivela kwiinkampani ezinje ngeReis, Leber & Hollman, Stedman, LH-Scot kunye neAdler. Intengiso ibandakanya: uboya begusha, ijezi zomsebenzi, ijezi ezinepolypropylene, ihempe zokulumkisa, ijezi.
Sixhomekeke kuwe ekukhetheni kunye nokwenza ubuntu kwiimveliso. Sinepaki yomatshini ehamba phambili osinika umsebenzi ofanelekileyo kunye nomgangatho ophezulu wabathengi bethu. Uluhlu olupheleleyo lweemodeli lunokuthengwa zombini kwivenkile yethu ekwi-Intanethi www.pm.com.pl okanye kwivenkile yethu kwiAllegro "PRODUCER-BHPMsgstr ". Ukuba ufuna ukubona iodolo yethu yomzekelo, nceda undwendwele ithebhu malunga firmie.
isatshisi esibonakalisayosweatshirt ngombalasweatshirt kunye nelogoI-sweatshirt enezibonisii sweatshi ngaphandle kwehodiAmagada okhuselekoI sweatshi zentshukumo zabantu abasebenzayoiisuti zomsebenzii sweatshi zasesikolweniI sweatshi zenkampaniI-sweatshirts yasekwindlaI-sweatshirts yehloboiintengiso zentengisoizinto zokukhwela isikhepheintengiso ye-sweatshi yeemfazweizibhengezo zentengisoi-unisex sweatshirtsi sweatshi yesentwasahloboI sweatshi enxibe iihempeI sweatshi kunye neepokethiI sweatshi kunye noshicileloi-sweatshirts ebusikaI sweatshi yabasetyhiniIingubo zamadodaezona sweatshi zentengiso ezilungileyo kakhuluezempilo nezokhuselekoimpahla yokunxibaiimpahla zentengisoIimpahla zomsebenzii sweatshi yezemidlaloiiseshti zentengiso ezingabizi
5 / 5 ( 7 iivoti )